﻿﻿ अमेरिकी भिसाको लागि आवेदन गर्न | Frequently Asked Questions (FAQ) - Nepal (Nepali)
तपाइँ यहाँ हुनुहुन्छ: होम / Frequently Asked Questions (FAQ)
FAQ - सामान्य भिसा सूचना
FAQ - भिसा अस्वीकृति
FAQ - वाणिज्य/पर्यटक भिसा
FAQ - कार्य भिसा
FAQ - छात्र भिसा
FAQ - विनिमय आगन्तुक भिसा
FAQ - ट्रान्जिट/जहाज चालक दल भिसा
FAQ - धार्मिक कामदारलाई भिसा
FAQ - मेरो पासपोर्ट ट्रयाक गर्नुहोस्
FAQ - भिसा कागजात पैकेट र आधुनिककृत आप्रवासी वीजा (MIV)
FAQ - आवेदन प्रोफाइल
अमेरिकी भिसाको लागि आवेदन गर्न मेरो पासपोर्ट कहिलेसम्म मान्य हुनु पर्छ?
के म भिसा छूट कार्यक्रमको लागि योग्य छु?
ESTA का लागि शुल्क कति छ र कसले यो भुगतान गर्नु पर्दछ?
मैले ESTA बिना संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गरें भने के हुन्छ?
म नेपालमा बसेको तेस्रो देशको राष्ट्रिय हुं भने, के मैले नेपालमा एउटा गैर आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छु?
सबै गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरुले साक्षात्कारका लागि अमेरिकी दूतावासमा आउनु पर्छ?
मसंग एउटा गैर आप्रवासी भिसा छ जो चाँडै समाप्त हुनेछ र म यो नवीकरण गर्न चाहन्छु। के मैले फेरि पूरै भिसा आवेदन प्रक्रियामा जानु पर्नेछ?
मेरो पासपोर्ट समाप्त भएको छ, तर यसमा भएको अमेरिका भिसा अझै पनि मान्य छ। के मलाई एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ?
मेरो दोहोरो नागरिकता छ। मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्राको लागि कुन पासपोर्ट उपयोग गर्नु पर्छ?
मैले कसरी आफ्नो भिसा विस्तार गर्न सक्छु?
म के मैले आफ्नो भिसा आवेदन फारम विद्युतीय रुपमा पेश गर्नै पर्छ?
"प्रशासनिक प्रशोधन" के हो?
मैले कसरी मेरो भिसा पढ्ने र बुझ्ने?
म संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुंदै मेरो भिसा समाप्त हुनेछ। के अब कुनै समस्या हुन्छ?
म संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्दा के हुनेछ?
मैले संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्दा मेरो I-94मा पुगिन। मैले के गर्नुपर्छ?
मेरो DS-160 पेस गर्ने र पुष्टि पृष्ठ मुद्रण गर्नेमा प्रश्न छ। म थप जानकारीको लागि कहाँ जान सक्छु?
मैले मेरो नाम परिवर्तन गरियो। मेरो पुरानो नाम सित् मेरो U.S. भिसा अझै पनि मान्य छ?
फेरि शीर्ष जाने
प्र.1 अमेरिकी भिसाको लागि आवेदन गर्न मेरो पासपोर्ट कहिलेसम्म मान्य हुनु पर्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहन तपाईंको अभीष्ट अवधि (देश-विशेष सम्झौता ले छुट प्रदान नगरेसम्म) देखि कम्तीमा छ महिना वैधता मिति भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्राको लागि वैध पासपोर्ट हुनुपर्छ।
प्रश्न.2के म भिसा छूट कार्यक्रमको लागि योग्य छु?
तपाईं एउटा भिसा छूट कार्यक्रम देशको नागरिक हो भने, एउटा मिसिनले पढ्नसक्ने पासपोर्ट छ भने, अस्थायी व्यापार वा कम भन्दा 90 दिनको एउटा यात्राको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, अन्य कार्यक्रमका आवश्यकताहरू पूरा गरे, र यात्रा प्राधिकरणको लागि इलेक्ट्रोनिक प्रणाली (ESTA) को एउटा प्राधिकरण प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईं भिसा छूट कार्यक्रमको लागि योग्य हुनुहुन्छ।
तपाईंलाई यस कार्यक्रमको उपयोग गर्न एउटा भिसा छूट कार्यक्रम-योग्य देशको नागरिक हुनु पर्छ। VWP-योग्य देशहरूको नागरिक नभएमा VWP-योग्य देशहरूका स्थायी बासिन्दा पनि भिसा छूट कार्यक्रमको लागि योग्य हुंदैनन। हामी तपाईंलाई VWP का लागि योग्य भएको निर्धारित गर्नको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि यात्रा अघि भिसा छूट कार्यक्रम वेबसाइट हेर्न सिफारिस गर्दछौं।
प्र.3 ESTA का लागि शुल्क कति छ र कसले यो भुगतान गर्नु पर्दछ?
भिसा छूट कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका जाने सबै यात्रीका लागि ESTA दर्ता आवश्यक छ। ESTA दर्ताको लागि शुल्क US$ 14 छ। शुल्क डेबिट कार्ड वा तल दिएका क्रेडिट कार्डमा कुनै पनि उपयोग गरी अनलाइन भुक्तान गर्न सकिन्छ: भिसा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, वा डिस्कवर। तपाईंसंग क्रेडिट कार्डको सही प्रकार छैन भने तेस्रो पक्ष (यात्रा एजेन्ट, परिवारका सदस्यहरू, आदि) ले तपाईंको लागि ESTA शुल्क तिर्न सक्नेछन। ESTA दर्ता निषेध भएमा, शुल्क मात्र US$4छ।
प्र.4 मैले ESTA बिना संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गरें भने के हुन्छ?
ESTA मार्फत अनुमोदन प्राप्त नगरेका भिसा छूट कार्यक्रमका यात्रीहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि हवाई जहाजमा बोर्डिंग गर्न अस्वीकार गरिने अपेक्षा गर्नुपर्छ। तपाईंलाई बोर्ड गर्न अनुमति दिइयो भने, तपाईंलाई प्रविष्टि (अर्थात्, आगमन हवाई अड्डा)को अमेरिकी प्रवेशको पोर्ट ऑफ़ एंट्रीमा इन्कारको सामना गर्ने सम्भावना हुन सक्छ। ESTA दर्ता पूरा गर्न सामान्यतया केही मिनेट लिन्छ, प्राधिकरण अक्सर सेकेन्डमा आइपुग्छ, दुइ वर्षको अवधि भित्र यात्रीको पासपोर्ट समाप्त नभएसम्म, यो दुई वर्षको लागि मान्य छ। यस्तो अवस्थामा, ESTAको वैधता पासपोर्टको वैधतासंगै सीमित छ।
प्र.5 म नेपालमा बसेको तेस्रो देशको राष्ट्रिय हुं भने, के मैले नेपालमा एउटा गैर आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छु?
आवेदकलाई सामान्यतया आफ्नो राष्ट्रियता वा निवास गरेको देशमा आवेदन गर्न सल्लाह दिइन्छ। नेपालमा कानूनी रूपमा उपस्थित व्यक्तिले नेपालमा भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छ। तर, आवेदकहरुले जहाँबाट सुविधा वा ढिलाइ हुन्छ, त्यो मात्र नहेरेर तपाईंको गृह जिल्लामा अपॉइंटमेंट पाउन आवेदकले निर्णय लिनुपर्छ। विचार गर्ने एउटा कुरा, उदाहरणका लागि, आवेदकको बलियो सम्बन्ध देखाउन सक्ने कन्सुलर जिल्ला हो।
भिसा जारी हुनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, न त संसाधन समयको कुनै ग्यारेन्टी छ। इन्कार गरिएमा, आवेदन शुल्क फिर्ती हुने छैन।
प्र.6 सबै गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरुले साक्षात्कारका लागि अमेरिकी दूतावासमा आउनु पर्छ?
हो, धेरैजसो आवेदकको लागि। साक्षात्कार आवश्यकताको लागि मात्र केही अपवाद छन। निम्न आवेदकहरुले सामान्यतया व्यक्तिगत हाजिर हुनु पर्दैन:
A-1, A-2 (केन्द्रीय सरकारी व्यापारमा यात्रा गर्ने केन्द्रीय सरकारी अधिकारी), C-2, C-3 (केन्द्रीय सरकारी व्यापारका सरकारी यात्री), वा G-1, G-2, G-3, G-4 (अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सन्दर्भमा यात्रा गर्ने केन्द्रीय सरकारका अधिकारीहरु, वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कर्मचारीहरु) का लागि आवेदकहरु
प्र.7 मसंग एउटा गैर आप्रवासी भिसा छ जो चाँडै समाप्त हुनेछ र म यो नवीकरण गर्न चाहन्छु। के मैले फेरि पूरै भिसा आवेदन प्रक्रियामा जानु पर्नेछ?
प्रत्येक गैर आप्रवासी भिसा आवेदन एउटा अलग प्रक्रिया हो। यदि तपाईंको पहिले भिसा थियो र तपाईंको वर्तमान गैर आप्रवासी भिसा अझै पनि मान्य छ भने पनि, सामान्य ढंगले आवेदन गर्नुपर्छ।
प्र.8 मेरो पासपोर्ट समाप्त भएको छ, तर यसमा भएको अमेरिका भिसा अझै पनि मान्य छ। के मलाई एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ?
पर्दैन। तपाईंको भिसा अझै पनि मान्य छ भने दुई पासपोर्ट (पुरानो र नयाँ) संग संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, जब सम्म भिसा वैध छ, क्षतिग्रस्त छैन, र तपाईंको यात्राको प्रमुख उद्देश्यका लागि भिसाको उचित प्रकार त्यही हो। (उदाहरण: पर्यटक भिसा , यदि तपाईंका यात्राको प्रमुख उद्देश्य पर्यटन हो भने)। साथै, दुवै पासपोर्टमा नाम र अन्य व्यक्तिगत डेटा समान हुनुपर्छ। नयाँ पासपोर्टमा संकेत गरिएको तपाईंको राष्ट्रियता, भिसा ग्रहण गरेको पासपोर्टमा देखाएको जस्तो नै हुनुपर्छ।
प्र.9 मेरो दोहोरो नागरिकता छ। मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्राको लागि कुन पासपोर्ट उपयोग गर्नु पर्छ?
तपाईंको एउटा राष्ट्रियता अमेरिकी होइन भने, तपाईंको रुचि अनुसार जुनै पनि राष्ट्रियताको उपयोग गरेर आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले अमेरिकी दूतावासलाई तपाईंको आवेदन फारममा सबै राष्ट्रियताको खुलासा गर्नुपर्छ। अमेरिकी नागरिक, दोहोरो नागरिक/नागरिकहरुले पनि अमेरिकी पासपोर्ट प्रयोग गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश र प्रस्थान गर्नुपर्छ।
प्र.10 मैले कसरी आफ्नो भिसा विस्तार गर्न सक्छु?
भिसाको वैधता त्यसको प्रकार विचार नगरी विस्तार गरिंदैन। तपाईंले नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्नुपर्छ।
प्र.11 म के मैले आफ्नो भिसा आवेदन फारम विद्युतीय रुपमा पेश गर्नै पर्छ?
हो, तपाईंले DS-160 पूरा गरेर आफ्नो अमेरिकी दूतावासको साक्षात्कारमा जांदा तपाईं संग DS-160 पुष्टि पृष्ठको एउटा छापिएको प्रतिलिपि ल्याउनै पर्छ।
प्र.12 "प्रशासनिक प्रशोधन" के हो?
केही भिसा आवेदनलाई अझै बढी प्रशासनिक प्रशोधनको आवश्यकता पर्छ जसले गर्दा कन्सुलर अफिसरसंग तपाईंको साक्षात्कार पछि अतिरिक्त समय लिन्छ। उनिहरुले आवेदन गरेपछि तपाईंलाई यस संभावनाको सल्लाह दिएको छ। अधिकांश प्रशासनिक संसाधन भिसा साक्षात्कारको 60 दिन भित्र समाधान हुन्छ। कन्सुलर मामिलाको वेबसाइटको यस वेब पेज मा प्रशासनिक प्रशोधनको अझ बढी जानकारी छ।
प्र.13 मैले कसरी मेरो भिसा पढ्ने र बुझ्ने?
तपाईंले आफ्नो भिसा प्राप्त गर्ने साथै भिसामा छापिएको तपाईंको सबै व्यक्तिगत जानकारी सही हो भन्ने सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको भिसामा भएको कुनै पनि जानकारी तपाईंको पासपोर्टमा भएको जानकारीसंग मिलेन वा अन्यथा गलत छ भने, तुरुन्त जारी गर्ने अख्तियारसंग सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंको भिसाको समाप्ति मिति तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न भिसा प्रयोग गर्ने अन्तिम दिन हो। यसले तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा कति लामो रहन सकिन्छ भन्ने संकेत गर्दैन। तपाईंको प्रवास तपाईंले प्रवेश गर्ने पोर्टमा होमल्याण्ड सुरक्षा विभाग द्वारा निर्धारित गर्दछ। जब सम्म तपाईंले आफ्नो प्रवासको स्थितिमा होमल्याण्ड सुरक्षा विभागको निर्णय पालन गर्नुहुन्छ, तबसम्म तपाईंलाई कुनै समस्या पर्दैन।
तपाईंको भिसा विवरण बारेमा थप जानकारी अमेरिकी राज्य कन्सुलर मामिला विभागको वेभसाइटमा पाउन सकिन्छ।
प्र.14 म संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुंदै मेरो भिसा समाप्त हुनेछ। के अब कुनै समस्या हुन्छ?
हुंदैन, तपाईंले आफ्नो भिसा प्रवासको समयमा समाप्त भएता पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा आइपुग्दा होमल्याण्ड सुरक्षा अधिकारीको विभाग द्वारा अधिकृत समय र अवस्था सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहन सक्नुहुन्छ, जो तपाईंको आफ्नो पासपोर्टमा मुद्रांकित हुनेछ। तपाईंले थप जानकारी यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
प्र.15 म संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्दा के हुनेछ?
तपाईंको एयरलाइनले एउटा खाली भन्सार घोषणा फारम 6059B दिनुपर्छ। सँगै यात्रा गर्ने एउटा परिवारको लागि एउटा भन्सार घोषणा मात्रै आवश्यक छ।
भिसाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश ग्यारेन्टी दिंदैन, तर विदेशबाट आउँने विदेशी नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको पोर्टसम्म यात्रा गर्न र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्ने अनुमतिको लागि अनुरोध गर्न दिन्छ। जन्मभूमि सुरक्षा विभाग, अमेरिकी भन्सार र सीमा संरक्षण (CBP) अधिकारीहरुसंग संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशको लागि अनुमति वा अस्वीकार गर्ने, र एउटा यात्री कति लामो रहन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार छ। प्रविष्टिको पोर्टमा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशको मन्जुरी दिंदा, भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले प्रवासको लम्बाइ निर्धारण गर्नेछ। पहिले, यात्रीले यो जानकारीसंग एउटा कागज I-94 (प्रवेशको रेकर्ड) प्राप्त गर्दथे। यो प्रक्रिया ऐले केही अपवाद संग, स्वचालित छ। यात्रीलाई आफ्नो यात्रा दस्तावेजमा प्रवेश, प्रवेशको वर्ग, र आजसम्मको प्रवेशको जानकारी दिएको एउटा CBP प्रवेश टिकट प्रदान गरिनेछ। CBP वेबसाइटमा धेरै जान्नुहोस्। यात्रीले विदेशी दर्ता, अध्यागमन अवस्था वा रोजगार प्राधिकरणको प्रमाणिकरणको लागि आफ्नो I-94को एउटा प्रतिलिपि आवश्यक परेमा www.cbp.gov/I94 बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईंले CBP वेबसाइटमा प्रवेशको बारेमा जानकारी पुनरावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्र.16 मैले संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्दा मेरो I-94मा पुगिन। मैले के गर्नुपर्छ?
पूर्व समयमा, CBP अधिकारीहरुले प्रविष्टि प्रदान गरिएका विदेशी यात्रीले एउटा कागज फारम I-94 (आगमन/प्रस्थान रेकर्ड) प्राप्त गर्दथे। यो प्रक्रिया अब केही अपवाद संग, स्वचालित छ। तपाईंले एउटा कागज फारम I-94 वा I-94W प्राप्त गरेर यदि अमेरिकाबाट प्रस्थान गर्दा तपाईंको कागज फारम I-94 आगमन/प्रस्थान रेकर्ड व्यावसायिक विमान वा CBP लाई फर्काउन असफल भएमा, निर्देशनका लागि CBP वेबसाइट हेर्नहोस्। अमेरिकी दूतावास जनरललाई तपाईंको कागज फारम I-94 वा I-94W नपठाउनुहोस।
तपाईंले प्रविष्टि प्रदान गरेपछि जब कागज फारम I-94, I-94 को सट्टा एउटा भर्नाको टिकट प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंको पासपोर्ट रेकर्ड विद्युतीय रुपमा सृष्टि गरिएको थियो, र कागज प्रतिलिपि तपाईंलाई दिइएको थिएन। CBPले विद्युतीय रुपमा अमेरिका देखि तपाईंको प्रस्थानको रेकर्ड गर्नेछ। CBP वेबसाइटमा धेरै जान्नुहोस्।
17. मेरो DS-160 पेस गर्ने र पुष्टि पृष्ठ मुद्रण गर्नेमा प्रश्न छ। म थप जानकारीको लागि कहाँ जान सक्छु?
हाम्रो कल सेन्टर आवेदन फर्मका लागि सहायता प्रदान गर्न असमर्थ छ। DS-160 पूरा गर्न कुनै पनि सोधपूछको लागि निम्न वेबसाइटमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
18. मैले मेरो नाम परिवर्तन गरियो। मेरो पुरानो नाम सित् मेरो U.S. भिसा अझै पनि मान्य छ?
आफ्नो नाम कानुनी रूपमा विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, वा अदालत आदेश नाम परिवर्तन मार्फत परिवर्तन भएको छ भने, तपाईँले एउटा नयाँ राहदानी प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ। तपाईँ संग एउटा नयाँ राहदानी छ, राज्य विभाग ले तपाईंलार्इ नयाँ U.S. भिसा बनाउन को लागि सजिलो र संयुक्त राज्य अमेरिका मा वा देखि सजिलो संग यात्रा गर्नको लागि लागू सुझाव।
धारा 214 (b) के हो?
एउटा आवेदकले कसरी "बलियो सम्बन्ध" साबित गर्ने?
धारा 214(b) अन्तर्गत इन्कार स्थायी हो?
निर्णय उल्टाउनका लागि कन्सुलर अफिसरलाई कसले प्रभाव पार्न सक्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा खुला समाज हो। अन्य थुप्रै देशहरूको विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्थानीय अधिकारीहरु संग दर्ता जस्तो रूपमा आन्तरिक नियंत्रण धेरैजसो आगंतुकहरुलाई लाद्दैन। हाम्रो अध्यागमन कानुनमा सिफारिस अधिकारीहरुले हरेक भिसा आवेदकलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एउटा उद्देश्यपूर्ण आप्रवासीको रुपमा हेर्नु आवश्यक छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अभारग्रस्त यात्रा लाभ उठाउन, तपाईंलाई एउटा आगन्तुक वा विद्यार्थी भिसा जारी गर्नु पहिले विदेश फर्केर जान्छु भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी छ।
प्र.1 धारा 214 (b) के हो?
धारा 214 (b) अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन (INA)को भाग हो। यसले भन्छ:
(b) प्रत्येक विदेशी (खण्ड 101 (a) (15) को उप अनुच्छेद (L) वा (V)मा वर्णन गरिएको एउटा गैर आप्रवासी, र खण्ड 101(a)(15)(H)(i) को subclause (b1) बाहेक)कुनै पनि प्रावधानमा वर्णन गरिएको एउटा गैर आप्रवासी देखि बाहेक अन्यलाई अध्यागमनका अधिकारीहरूले प्रवेशको लागि आवेदनको समयमा, उसले कन्सुलर अफिसरको संतुष्टि नबनाए सम्म उ एउटा आप्रवासी हो, र उ खण्ड 101(a) (15) अन्तर्गत एउटा गैर आप्रवासी अवस्थाको हकदार हुन्छ। कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अन्तर्गत विशेषाधिकार, छुट, र प्रतिरक्षणको हकदार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको एउटा अधिकारी, वा यस्ता विदेशीको नजीकको परिवारको चाकर, नोकर, कर्मचारी रहेको यस्तो कुनै पनि विदेशीले आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्न वा भिसा प्राप्त गर्न सक्दैनन, वा खण्ड 247 (b) द्वारा निर्धारित गरिए अनुसार फारम र विषयमा एउटा लिखित माफी कार्यान्वयन नभएसम्म आप्रवासीको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।
हाम्रो कन्सुलर अधिकारीहरुको एउटा कठिन कार्य छ। कुनै व्यक्ति अस्थायी भिसा प्राप्त गर्न योग्य छ छैन भन्ने तिनीहरूले धेरै नै कम समयमा निर्णय लिनुपर्छ। अधिकांश अवस्थामा छोटो साक्षात्कार र आवेदकले प्रदान गरेका प्रमाणको अवलोकन गरेपछि निर्णय लिइन्छ। आगन्तुक वा छात्र भिसाको लागि योग्य हुनको लागि, एउटा आवेदकले 101(a) (15)(B) वा INAको (F) खण्डहरुका आवश्यकताहरु क्रमशः पूरा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न असफल भएमा INA 214(b) अन्तर्गत भिसा इन्कार हुनेछ। यस्तो इन्कारको लागि सबै भन्दा बढी आधारमा भावी अतिथि वा विद्यार्थी हुन जसको विदेश निवास त्याग्ने कुनै मनसाय छैन। तिनीहरूले अस्थायी प्रवासको अन्तमा संयुक्त राज्य अमेरिका छाडेर जाने बाध्य गराउने विदेश सम्बन्ध छ भनेर यस्तो निवासको अस्तित्व प्रमाणित गर्दछन। व्यवस्थाले प्रमाणित गर्ने यो बोझ आवेदकमा छाडिदिन्छ।
प्रश्न -2 एउटा आवेदकले "बलियो सम्बन्ध" कसरी साबित गर्न सक्छ?
सम्बन्ध आफ्नो देशमा तपाईंलाई बाँध्ने तपाईंको जीवनका विभिन्न पक्षहरू हुन्। बलियो सम्बन्ध देश, शहर, र व्यक्ति माझ भिन्न हुन्छन, तर उदाहरणमा पर्दछन:
तपाईंको घर; र/वा
परिवार र साथीहरूसित तपाईंको सम्बन्ध।
भिसाको संचालन गरिरहेको बेला, कन्सुलर अधिकारीहरुले प्रत्येक आवेदन व्यक्तिगत हेर्दछन र एउटा अस्थायी भ्रमण पछि आवेदकको प्रस्थान सुनिश्चित गर्ने आवेदकका परिस्थिति, यात्रा योजना, आर्थिक स्रोत, र संयुक्त राज्य अमेरिकाको बाहिर सम्बन्धको विचार गर्दछन।
प्र.3 धारा 214 (b) अन्तर्गत एउटा इन्कार स्थायी हो?
होइन, खण्ड 214(b) अन्तर्गत इन्कार, वा अयोग्यता त्यो खास आवेदनको लागि हो, त्यसकारण एकपल्ट मुद्दा बन्द भएपछि कन्सुलर विभागले अगाडि कुनै पनि कारबाही गर्न सक्दैनन। कुनै अपील प्रक्रिया छैन। तपाईंलाई भिसा निर्णय गर्ने सम्बन्धित विचार, वा तपाईंको अन्तिम आवेदन देखि तपाईंको परिस्थितिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएका छन भन्ने थप जानकारीको महसुस भएको छ भने, तपाईंले भिसाको लागि पुनः आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। पुनः आवेदन गर्न तपाईंले एउटा नयाँ आवेदन गर्नुपर्छ, आवेदन शुल्क तिर्नुपर्छ, र नयाँ साक्षात्कारको लागि एउटा अपॉइंटमेंट तय गर्नुपर्छ। तपाईंले कुनै पनि पुनरआवेदन प्रक्रियाहरु विषयमा सिक्न, फेरि आवेदन गर्ने योजना भएको अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा पुनरावलोकन गर्नुहोस्।
प्र.4 निर्णय उल्टाउनको लागि कन्सुलर अफिसरलाई कसले प्रभाव पार्न सक्छ?
अध्यागमन कानुनले विदेशी कन्सुलर अधिकारीहरुलाई भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारीका लागि प्रतिनिधित्व गर्दछ। तिनीहरूले सबै भिसा मुद्दाहरूमा अन्तिम कुरा राख्न सक्छन। नियम अनुसार, अमेरिकी राज्य विभागको कन्सुलर निर्णय पुनरावलोकन गर्ने अधिकार छ, तर तथ्यको निर्णय गर्न भिन्नता अनुसार यो अधिकार कानुनको व्याख्या गर्न सीमित छ। यस्तो खंडन भएमा यो प्रश्न हुन्छ कि आवेदकको विदेशमा आवश्यक निवास छ कि छैन, जो एउटा सत्यतथ्य हो। तसर्थ, यो समस्या समाधान गर्न हाम्रा विदेश सेवा पोस्टमा भएका कन्सुलर अधिकारीहरुको अधिकार भित्र पर्दछ। एउटा आवेदकले बलियो सम्बन्ध देखाएर नयाँ चित्तबुझ्दो प्रमाणको प्रस्तुति मार्फत मात्र पूर्व भिसा इन्कार गरेकोमा परिवर्तन गर्न पोस्टलाई प्रभाव पार्न सक्छ।
214 (b)देखि अन्य भिसा अयोग्यताको बारेमा जानकारीका लागि, कृपया अमेरिकी राज्य विभागको कन्सुलर मामिला वेभसाइटमा हेर्नुहोस।
FAQ- वाणिज्य/पर्यटक भिसा
म एउटा पर्यटक वा व्यापार भिसामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कहिलेसम्म रहन सक्छु?
मेरो अतिथि भिसा (B-1/B-2) संयुक्त राज्य अमेरिकामा आगमनको मैले सोचेको मिति पछि समाप्त हुनेछ। मैले प्रस्थान गर्नुअघि एउटा नयाँ भिसा प्राप्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
मेरो अमेरिकी भिसा अर्को6महिनामा समाप्त हुनेछ। मैले वर्तमान भिसा समाप्त भएपछि एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ वा म पहिल्यै आवेदन गर्न सक्छु?
मैले हालै मेरो पुरानो पासपोर्टमा भएको मेरो मातृ नामसंगको एउटा वैध B-1/B-2 भिसा लिएको छ। मलाई मेरो विवाहको नाम भएको नयाँ पासपोर्टमा यो भिसा स्थानान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रक्रिया के हो?
मेरो वर्तमान अमेरिकी भिसा मैले पछिल्लो नौकरी गर्दै गरेको समय मलाई जारी गरेको थियो। ऐले म एउटा नयाँ कम्पनीमा नयाँ काम गर्न थालेको छ र मेरो नयाँ रोजगारदाताले मलाई अर्को महिनामा निर्धारित हुने संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा सम्मेलनमा उपस्थित गराउन चाहन्छन। म यही भिसा प्रयोग गर्न सक्छु वा मैले एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्नु पर्छ?
मेरो बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययनरत छ। म उसँगै बस्न सक्छु?
प्र.1 म एउटा पर्यटक वा व्यापार भिसामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कहिलेसम्म रहन सक्छु?
एउटा अमेरिकी गैर आप्रवासी भिसाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशको एउटा पोर्ट (विमानस्थल/बन्दरगाह)को यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले आफ्नो प्रवेशको गन्तव्य पोर्टमा पुगेपछि, अमेरिका भन्सार र तपाईंका प्रवेशको प्रक्रिया गर्ने सीमा सुरक्षा अधिकारीले तपाईं देशमा रहन सक्ने समयको निर्धारण गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो गैर आप्रवासी भिसाको वैधता भएको अन्तिम दिनसम्म प्रवेश पोर्टको यात्रा गर्न सक्नु हुन्छ। भिसा अवधिले तपाईं कानूनी तरिकासंग संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहन सक्ने समयको निर्धारण गर्दैन; मात्र भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईंको आगमन भएमा निर्णय गर्न सक्छ।
प्रश्न 2. मेरो अतिथि भिसा (B-1/B-2) संयुक्त राज्य अमेरिकामा आगमनको मैले सोचेको मिति पछि समाप्त हुनेछ। मैले प्रस्थान गर्नुअघि एउटा नयाँ भिसा प्राप्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
तपाईं भिसामा संकेत गरिएको वैधताको अन्तिम मितिसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका आइपुग्न सक्नुहुन्छ। आगमनमा भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईंको बस्ने अवधि निर्धारण गर्छ। तपाईंको भिसा तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसेको बेला नै समाप्त हुन सक्छ - तपाईं अधिकारीले दिएको समय अवधि भन्दा बढी बसेको छैन भनेर ढुक्क हुनुहोस्।
प्र.3 मेरो अमेरिकी भिसा अर्को6महिनामा समाप्त हुनेछ। मैले वर्तमान भिसा समाप्त भएपछि एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ वा म पहिल्यै आवेदन गर्न सक्छु?
तपाईंले आफ्नो वर्तमान भिसा समाप्त भएसम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। तपाईंको वर्तमान भिसा वैध छ भने पनि तपाईंले एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्र.4 मैले हालै मेरो पुरानो पासपोर्टमा भएको मेरो मातृ नामसंगको एउटा वैध B-1/B-2 भिसा लिएको छ। मलाई मेरो विवाहको नाम भएको नयाँ पासपोर्टमा यो भिसा स्थानान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रक्रिया के हो?
U.S. भिसा समीक्षा अर्को एक राहदानी देखि स्थान्तरण गर्न सकिँदैनआफ्नो नाम कानुनी तवरमा विवाह मार्फत परिवर्तन, छोडपत्र, वा अदालत आदेश नाम परिवर्तन भएको छ भने, तपाईं नयाँ पासपोर्ट प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ। एक पटक तपाईंको नयाँ पासपोर्ट प्राप्त हुनेछ, संयुक्त राज्य अमेरिका देखि यो यात्रा गर्न को लागि सजिलो बनाउन राज्य विभाग तपाईंलाइ नयाँ भिसाको लागि लागू सिफारिस गर्न हुनेछ।
प्र 5. मेरो वर्तमान अमेरिकी भिसा मैले पछिल्लो नौकरी गर्दै गरेको समय मलाई जारी गरेको थियो। ऐले म एउटा नयाँ कम्पनीमा नयाँ काम गर्न थालेको छ र मेरो नयाँ रोजगारदाताले मलाई अर्को महिनामा निर्धारित हुने संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा सम्मेलनमा उपस्थित गराउन चाहन्छन। म यही भिसा प्रयोग गर्न सक्छु वा मैले एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्नु पर्छ?
तपाईंले आफ्नो भिसा मान्य भएसम्म त्यही भिसामा व्यापार या खुशीको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
प्र.6 मेरो बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययनरत छ। म उसँगै बस्न सक्छु?
तपाईंको बच्चा भेट्न तपाईंले आफ्नो B-1/B-2 भिसा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ (वा योग्य भएमा भिसा छूट कार्यक्रममा यात्रा गर्नुहोस्), तपाईंको आप्रवासी, काम, वा विद्यार्थी भिसा नभएसम्म, तपाईं आफ्नो बच्चासंग बस्न सक्नु हुनेछैन ।
याचिका के हो?
मैले आकस्मिक काम गर्न भिसा प्राप्त गर्न सक्छु?
अस्थायी भिसाको आवेदनको लागि कुनै उमेर सीमा छ?
मेरो संयुक्त राज्य आधारित नातेदार काम भिसाको लागि मेरो प्रायोजक बन्न सक्छ?
म संयुक्त राज्य अमेरिका कहिले प्रवेश गर्न सक्छु?
धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्कको भुगतान कसले दिन्छ र कहिले?
प्र.1 याचिका के हो?
अमेरिकी दूतावासमा अस्थायी कामदारको भिसाको लागि आवेदन गर्नुभन्दा अघि USCIS देखि अनुमोदित फारम I-129, गैर आप्रवासी कार्यकर्ताको लागि याचिका हुनुपर्छ। यो निवेदन तपाईंको प्रस्तावित रोजगार शुरू गर्ने मितिदेखि6महिना भन्दा पहिले तपाईंको भावी रोजगारदाताले पेश गर्नुपर्छ। तपाईंको रोजगारदाताले प्रशोधनका लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्न शिघ्रतिशिघ्र6महिना अवधिमा आवेदन फाइल गर्नुपर्छ। एकपल्ट अनुमोदन भएमा, तपाईंको रोजगारदाताले फारम I-797, एक्सन सूचना पठाउनेछ। थप जानकारीको लागि USCIS अस्थायी मजदुर वेबपेज हेर्नुहोस्।
नोट: तपाईंको याचिकाको अनुमोदन प्रमाणित गर्न अमेरिकी दूतावासलाई तपाईंको अनुमोदित फारमI-797का साथै I-129 याचिका रसीद संख्या चाहिन्छ। तपाईंको अन्तरवार्तामा यी दुवै ल्याउनुहोला।
प्रश्न2मैले आकस्मिक काम गर्न भिसा प्राप्त गर्न सक्छु?
सक्नुहुन्न। आकस्मिक कामको लागि कुनै भिसा छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्ने योजना भएका सबै आवेदकहरुसंग भिसा अपॉइंटमेंट गर्नुभन्दा पहिले एउटा अनुमोदित आवेदन हुनुपर्छ।
प्र.3 अस्थायी भिसाको आवेदनको लागि कुनै उमेर सीमा छ?
प्र.4 मेरो संयुक्त राज्य आधारित नातेदार काम भिसाको लागि मेरो प्रायोजक बन्न सक्छ?
सक्दैन। केवल तपाईंको रोजगारदाता तपाईंको प्रायोजक बन्न सक्छ।
प्र.5 म संयुक्त राज्य अमेरिका कहिले प्रवेश गर्न सक्छु?
तपाईंको फारम I-797मा वा रोजगार पत्रको तपाईंको प्रस्तावमा उल्लेख गरे अनुसार तपाईंको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने मितिको 10 दिनभन्दा पहिले संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न।
प्र.6 धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्कको भुगतान कसले दिन्छ र कहिले?
ब्लाङ्केट याचिकामा यात्रा गर्ने L-1 भिसा आवेदकले धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्क तिर्नुपर्छ। निवेदन दायर गरेको समयमा व्यक्तिगत L, H-1B र H-2B याचिकाको लागि अमेरिकी आवेदकले धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्क USCIS लाई तिर्नु पर्दछ।
I-20 के हो र यसलाई मैले कसरी प्राप्त गर्नु?
मैले आफ्नो छात्र भिसाको लागि कति पहिले आवेदन गर्नुपर्छ?
मैले आफ्नो भिसा प्राप्त गरें, मैले कहिले यात्रा गर्नुपर्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको समयमा एकजना व्यक्तिले एउटा स्कूलमा प्रवेश हासिल गर्यो र फारम I-20 पायो भने, उसको आगन्तुक भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्न सक्छ?
मैले एउटा भिन्न स्कूलका लागि I-20 प्राप्त गरें भने के हुन्छ?
म एउटा H-1B को रुपमा काम गर्दै थिएं र ऐले एउटा F-1को रूपमा विश्वविद्यालयमा भर्ती भएको छु। मैले विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न मेरो देश फर्कनु खाँचो छ?
F-1 विद्यार्थीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्न सक्छ?
SEVIS प्रणाली के हो र यसले कसरी मलाई असर गर्छ?
प्र.1 I-20 के हो र यसलाई मैले कसरी प्राप्त गर्नु?
फारम I-20 सम्भाव्य गैर आप्रवासी विद्यार्थीले F-1 या M-1 भिसा प्राप्त गर्नै पर्ने, प्रमाणित स्कूल द्वारा जारी अमेरिकी सरकारको कार्यालयी फारम हो। I-20 ले स्वीकृतिको प्रमाणको रूपमा कार्य गर्दछ, र यसमा SEVIS I-901 शुल्क तिर्न, भिसाका लागि आवेदन गर्न वा भिसाको अवस्था परिवर्तन गर्न, र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भर्ती हुन आवश्यक जानकारी पाइन्छ। फारम I-20 विद्यार्थीको SEVIS पहिचान संख्या हो जो बारकोडको सीधा माथिको माथिल्लो दाहिने पट्टि अक्षर N बाट शुरु भएको र त्यसपछि नौ अंक भएको हुन्छ।
प्रश्न2मैले आफ्नो छात्र भिसाको लागि कति पहिले आवेदन गर्नुपर्छ?f
तपाईंलाई आफ्नो I-20 पाउनेसाथै गैर आप्रवासी विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ। तपाईंले समयमै मिति सुनिश्चित गर्न छिट्टै आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। तर, एउटा विद्यार्थी भिसा तपाईंको I-20मा उल्लेख गरिएको शुरु मितिदेखि 120 दिन भन्दा पहिले जारी गरिन सक्दैन।
प्र.3 मैले आफ्नो भिसा प्राप्त गरें, मैले कहिले यात्रा गर्नुपर्छ?
तपाईंको प्रारम्भिक प्रवेशको लागि, तपाईंको I-20मा उल्लेख गरे अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रमको शुरुवातको 30 दिन भित्र संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ चाहे तपाईंको भिसा जहिले जारी भएको होस।
प्र.4 संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको समयमा एकजना व्यक्तिले एउटा स्कूलमा प्रवेश हासिल गर्यो र फारम I-20 पायो भने, उसको आगन्तुक भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्न सक्छ?
हो। सामान्य रुपमा, तपाईंले आफ्नो स्थितिको स्थिति उल्लंघन भएको छैन भने
तपाईंलाई नियमअनुसार एउटा गैर आप्रवासी भिसा लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गराइएको थियो भने, तपाईंको गैर आप्रवासी अवस्था वैध छ भने, र तपाईंले कुनै पनि अयोग्य कार्यहरू गर्नु भएको छैन भने तपाईंको गैर आप्रवासी भिसा अवस्था परिवर्तन गर्न आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। थप विवरणहरू लागि, USCIS वेबसाइट हेर्नुहोस्।
प्र.5 मैले एउटा भिन्न स्कूलका लागि I-20 प्राप्त गरें भने के हुन्छ?
तपाईंले आफ्नो अपॉइंटमेंट तय भएपछि I-20 प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंले साक्षात्कारको समयमा नयाँ I-20को विषयमा अमेरिकी कन्सुलर अफिसरलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ।
प्र.6 म एउटा H-1B को रुपमा काम गर्दै थिएं र ऐले एउटा F-1को रूपमा विश्वविद्यालयमा भर्ती भएको छु। मैले विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न मेरो देश फर्कनु खाँचो छ?
होइन। तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएपछि तपाईंले एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छैन किनकि भिसा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशको लागि मात्र चाहिन्छ। तपाईंले स्थितिको समायोजन आवश्यक छ भने निर्धारित गर्न USCIS को जाँच गर्नुहोस्। तपाईंले देश छाड्नुभयो भने पनि फेरि संयुक्त राज्य अमेरिका पुन: प्रवेश गर्न विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ।
प्र.7 F-1 विद्यार्थीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्न सक्छ?
F भिसा भएका पूर्णकालिक विद्यार्थीले प्रति हप्ता 20 घण्टासम्मको क्याम्पसभित्र रोजगार खोज्न सक्छन्। विद्यार्थी अवस्थामा पहिलो वर्ष पछि, आवेदकले USCIS देखि प्राधिकरण प्राप्त गरेर क्याम्पस बाहिर रोजगारका लागि आवेदन गर्न सक्छ। थप जानकारीका लागि तपाईंको विद्यार्थी सल्लाहकारसंग सम्पर्क गर्नुहोस्।
प्र.8 SEVIS प्रणाली के हो र यसले कसरी मलाई असर गर्छ?
विद्यार्थी र विनिमय पर्यटक सूचना प्रणाली (SEVIS) कार्यक्रमलाई सबै नयाँ र जारी विदेशी विद्यार्थी र विनिमय आगंतुकहरुको नामांकन अवस्था प्रमाणित गर्न विद्यालय तथा विनिमय कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ। विद्यार्थी भिसा आवेदकहरुले भिसा जारी गर्नुभन्दा पहिले SEVIS शुल्क तिर्न आवश्यक छ। SEVIS वेभसाइटमा थप विवरण छ।
मैले आफ्नो भिसा प्राप्त गरें, कहिले यात्रा गर्नुपर्छ?
"दुई वर्षे नियम" के हो?
दुई वर्षे नियमको परिवर्तन हुन सक्छ?
प्र.1 मैले आफ्नो भिसा प्राप्त गरें, कहिले यात्रा गर्नुपर्छ?
तपाईंको भिसा जहिले जारी भएको भएता पनि, तपाईंको फारम DS-2019मा उल्लेख गरे अनुसार विनिमय आगंतुक कार्यक्रमको शुरुवातको 30 दिन भित्रसम्म मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न सक्छन्।
प्रश्न2SEVIS प्रणाली के हो र यसले कसरी मलाई असर गर्छ?
विद्यार्थी र विनिमय पर्यटक सूचना प्रणाली (SEVIS) कार्यक्रमलाई सबै नयाँ र जारी विदेशी विद्यार्थी र विनिमय आगंतुकहरुको नामांकन अवस्था प्रमाणित गर्न विद्यालय तथा विनिमय कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ। विद्यार्थी भिसा आवेदकहरुले भिसा जारी गर्नुभन्दा पहिले SEVIS शुल्क तिर्न आवश्यक छ। त्यसपछि भुक्तानीको प्रमाणका रूपमा आवेदकले SEVIS I-901 शुल्क रसिद प्रदान गर्न आवश्यक छ। SEVIS वेभसाइटमा थप विवरण छ।
प्र.3 "दुई वर्षे नियम" के हो?
"दुई वर्षे नियम" अमेरिकी अध्यागमन कानुनको एउटा खण्डको लागि प्रयोग गरिने साधारण शब्द हो, जसमा धेरै विनिमय आगंतुकहरुले आफ्नो विनिमय भ्रमणको अन्त्य पछि र भिसाका केहि प्रकार, विशेष गरेर H-1, L-1, K-1 र आप्रवासी भिसा अन्तर्गत अमेरिका फर्कनुभन्दा अघि आफ्नो देशमा फर्केर त्यहां कम्तीमा दुई वर्षको लागि शारीरिक रुपमा उपस्थित हुने आवश्यकता पर्दछ।
दुई वर्ष नियमको अधीनमा J-1 भिसा धारकहरुलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न र स्थितिलाई निषेध गरिएको गैर आप्रवासी अवस्था (उदाहरणका लागि एउटा J-1 भिसा देखि एउटा H-1मा) समायोजन/परिवर्तनको लागि आवेदन गर्न अनुमति छैन वा पहिले दुई वर्षको लागि घर नफर्किकन वा स्वीकृत छूट प्राप्त नगरि कानुनी स्थायी निवासी अवस्था (हरियो कार्ड)को लागि आवेदन गर्न सक्दैनन्। तपाईं दुई वर्षे नियमको लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंको धनको स्रोत र तपाईंको देशको "सीप सूची" लगायत विभिन्न कारकद्वारा निर्धारित हुन्छ। यो तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिताएको समय अनुसार निर्धारित हुंदैन।
प्र.4 दुई वर्षे नियमको परिवर्तन हुन सक्छ?
संभवतः। अमेरिकी राज्य विभागको भिसा कार्यालयले मात्र दुई वर्ष नियमको छूट प्रदान गर्न सक्छ। तपाईंको पासपोर्टमा जेसुकै एनोटेट गरिएको भएता पनि, तपाईं नियमको अधीनमा हुनुहुन्छ भन्ने भिसा कार्यालयको पनि अन्तिम अधिकार छ। तपाईं दुई वर्षे नियमको भित्र पर्नुहुन्छ भने, तपाईंले छूट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं दुई वर्ष नियमको अधीनमा हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईंले अझै पनि माथि उल्लेख गरेका बाहेक पर्यटक भिसा वा कुनै पनि अन्य गैर आप्रवासी भिसाको योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
मेरो एक दिनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेर अर्को दिन अर्को देशको लागि उडान गर्ने योजना छ। मैले C-1 भिसा वा B-1/B-2 भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ?
प्र.1 मेरो एक दिनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेर अर्को दिन अर्को देशको लागि उडान गर्ने योजना छ। मैले C-1 भिसा वा B-1/B-2 भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ?
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको माध्यमबाट साथीहरूसंग भ्रमण वा घुमफिर गर्ने जस्ता कार्यको लागि पारबाहन भन्दा अन्य प्रयोजनका लागि विशेषाधिकार खोज्नुहुन्छ भने, तपाईंले B-2 भिसा जस्ता तपाईंका उद्देश्यका लागि आवश्यक भिसाको प्रकारका लागि योग्य भएर प्राप्त गर्नुपर्छ।
म धार्मिक कामदार भिसाको लागि आवेदन गर्दै छु, तर अनुमोदित याचिका छैन। म R-1 भिसासंग पहिले संयुक्त राज्य गएको छु र याचिकाको आवश्यकता थिएन। विगतमा एउटा R-1 भिसा भएको कारण म याचिका बिना R-1 भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छु?
प्र.1 म धार्मिक कामदार भिसाको लागि आवेदन गर्दै छु, तर अनुमोदित याचिका छैन। म R-1 भिसासंग पहिले संयुक्त राज्य गएको छु र याचिकाको आवश्यकता थिएन। विगतमा एउटा R-1 भिसा भएको कारण म याचिका बिना R-1 भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छु?
अनुमोदित आवेदनको आवश्यकता नोभेम्बर 28, 2008 बाट लागू भयो। R-1 गैर आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्ने सबै आवेदकहरुले अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन सेवा (USCIS) बाट एउटा अनुमोदित आवेदन राख्न आवश्यक छ। थप जानकारीको लागि USCIS वेबसाइट हेर्नुहोस्।
साक्षात्कार पछि मलाई आफ्नो पासपोर्ट कसरी फिर्ता मिल्नेछ?
मैले दूतावास/कन्सुलेटबाट पासपोर्ट लिन के देखाउनु पर्छ?
प्रमाणको-पहिचानको रूपमा कस्ता आईडी स्वीकार्य हुन्?
म बाहेक कसैले मेरो पासपोर्ट लिन सक्छ?
प्र.1 म कसरी साक्षात्कार पछि मेरो राहदानी प्राप्त गर्नु सक्छु ?
आफ्नो भिसा आवेदन स्वीकृत गरिएको छ भने, आफ्नो पासपोर्ट र भिसा तपाईं साक्षात्कार नियुक्तिका लागि निर्धारित गर्दा तपाईंले चयन पिकअप स्थानबाट संकलित गर्न सकिन्छ। जब पासपोर्ट चयन स्थानमा उपलब्ध हुनेछ तब तपाईंलाई इमेल प्राप्त हुनेछ।
प्र.2 मैले दूतावास/कन्सुलेटबाट पासपोर्ट लिन के देखाउनु पर्छ?
तपाईंको पासपोर्ट र भिसा एउटा अनधिकृत व्यक्तिलाई दिइएको छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न, आफ्नो पासपोर्ट सङ्कलन गर्दा तपाईंले पहिचानको लागि एउटा सरकारद्वारा जारी फोटो आईडी प्रस्तुत गर्नपर्छ।
प्र.3 प्रमाणको-पहिचानको रूपमा कस्ता आईडी स्वीकार्य हुन्?
तपाईंले सरकारले जारी गरेको मूल फोटो आईडी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
प्र.4 म बाहेक कसैले मेरो पासपोर्ट लिन सक्छ?
सक्छ। तर, तपाईंको प्रतिनिधि - परिवारका सदस्यहरू भएता पनि - तपाईंको पासपोर्ट सङ्कलन गर्न निम्न प्रस्तुत गर्नुपर्छ:
एउटा प्रतिनिधि तपाईंको तर्फबाट दस्तावेज संग्रह कार्यालयको देखि तपाईंको पासपोर्ट सङ्कलन गरिएको छ भने - परिवारका सदस्यहरूले समेतको मामलामा - प्रतिनिधि प्रस्तुत हुनुपर्छ:
पहिचानको लागि उनीहरूको आफ्नै सरकारद्वारा जारी मूल फोटो आईडी
तपाईंको सरकारद्वारा जारी फोटो आईडीको प्रतिलिपि
तपाईंको पासपोर्ट सङ्कलन गर्न तपाईंको प्रतिनिधिलाई अधिकृत गरिएको तपाईं हस्ताक्षर भएको एउटा पत्र। अख्तियार पत्रमा निम्न जानकारी हुनु पर्छ:
सरकार जारी फोटो आईडीमा देखाइएको तपाईंको प्रतिनिधिको पूरा नाम
कृपया प्राधिकरण पत्रका ढाँचाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
आवेदक 16 वर्ष मुनिको छ भने, निम्न कागजात आवश्यक छन्:
आवेदक आमा या बाबुको अख्तियार भएको एउटा मूल, हस्ताक्षर गरिएको पत्र
आवेदकको अख्तियार पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने आमाबाबुको सरकारले जारी गरेको फोटो आईडीको स्पष्ट प्रतिलिपि
प्रतिनिधिको सरकारद्वारा जारी मूल फोटो आईडी
नोट: एउटा समूह/परिवारको मामलामा, आवेदकहरुको प्रत्येकको लागि आवश्यक जानकारीसंग अख्तियार छुट्टै पत्र स्वीकार गरिनेछ।
हालै दूतावास/वाणिज्य दूतावासमा आप्रवासी भिसाको लागि मेरो अन्तर्वार्ता भएको थियो र मैले आफ्नो पासपोर्ट र भिसा प्राप्त गरेँ। तर मैले विमानमा आफ्नो साथमा अमेरिका लैजानका लागि शिलबन्दी गरिएको खाममा कागजातहरू भने पाइनँ। मेरो वकिल/आवेदक/साथीहरूले मलाई बताएअनुसार म ती कागजातबिना उड्न पाउँदिनँ। मैले के गर्नुपर्ला?
मैले आफ्ना नागरिक र वित्तीय कागजातहरू विद्युतीय रूपमा पठाएँ वा हुलाकबाट पठाएँ भन्ने कुरा नै मलाई याद छैन। मेरो भिसा कागजविहीन प्रक्रियाअन्तर्गत जारी गरिएको थियो कि भनी निर्धारण गर्ने अर्को तरिका छ?
आप्रवासी भिसा पाएका र अमेरिकाको प्रवेश विन्दुसम्म हातमा शिलबन्दी खाम बोक्नुपरेका अन्य मानिसहरू मैले चिनेको छु। तिनीहरूका लागि चाहिँ प्रक्रिया किन फरक भएको होला?
प्र१: हालै दूतावास/वाणिज्य दूतावासमा आप्रवासी भिसाको लागि मेरो अन्तर्वार्ता भएको थियो र मैले आफ्नो पासपोर्ट र भिसा प्राप्त गरेँ। तर मैले विमानमा आफ्नो साथमा अमेरिका लैजानका लागि शिलबन्दी गरिएको खाममा कागजातहरू भने पाइनँ। मेरो वकिल/आवेदक/साथीहरूले मलाई बताएअनुसार म ती कागजातबिना उड्न पाउँदिनँ। मैले के गर्नुपर्ला?
उ: अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही आप्रवासी भिसा आवेदनहरूको विद्युतीय प्रोसेसिङ सुरु गरेको छ। यदि राष्ट्रिय भिसा केन्द्र वा तपाईँको भिसा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने दूतावास/वाणिज्य दूतावासले CEAC पोर्टलमार्फत तपाईँलाई नागरिक र वित्तीय लगायतका सहायक कागजात पेश गर्न लगाएको भए तपाईँको भिसा नयाँ विद्युतीय प्रक्रियाअन्तर्गत जारी गरिएको हो। तपाईँको भिसा अन्तर्वार्ता लिने र भिसा जारी गर्ने दूतावास/वाणिज्य दूतावासले तोकेरै जानकारी गराएको अवस्थामा बाहेक तपाईँले अमेरिकाको प्रवेश विन्दुमा प्रस्तुत गर्नका लागि कागजातहरूको शिलबन्दी खाम हातमा बोक्न आवश्यक छैन। तपाईँका कागजातहरू अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको अमेरिका प्रवेश गर्ने सबै आप्रवासीहरूको निरीक्षण गर्ने भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (DHS/CBP) कार्यालयमा विद्युतीय रूपमा पठाइसकिएको छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुनुहोस् । तपाईँ अमेरिकाको प्रवेश विन्दुस्थित आप्रवासन नियन्त्रणमा आइपुग्दा CBP अधिकारीहरूलाई अमेरिकामा तपाईँको प्रवेश प्रक्रियाको लागि आवश्यक सबै जानकारी पुगिसकेको हुनेछ। यस नयाँ विद्युतीय प्रक्रियाले तपाईँको आप्रवासी भिसा आवेदन र अमेरिका प्रवेशको प्रक्रियामाथिको कार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
प्र२: मैले आफ्ना नागरिक र वित्तीय कागजातहरू विद्युतीय रूपमा पठाएँ वा हुलाकबाट पठाएँ भन्ने कुरा नै मलाई याद छैन। मेरो भिसा कागजविहीन प्रक्रियाअन्तर्गत जारी गरिएको थियो कि भनी निर्धारण गर्ने अर्को तरिका छ?
उ: छ। आफ्नो भिसा पृष्ठमा हेर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कागजातहरू आवश्यक नभएमा भिसा पृष्ठको तपाईँको फोटोमुनि दाहिने कुनामा "IV DOCS in CCD" लेखिएको हुन्छ।
प्र३: आप्रवासी भिसा पाएका र अमेरिकाको प्रवेश विन्दुसम्म हातमा शिलबन्दी खाम बोक्नुपरेका अन्य मानिसहरू मैले चिनेको छु। तिनीहरूका लागि चाहिँ प्रक्रिया किन फरक भएको होला?
उ: केही आप्रवासी भिसा आवेदनहरूमाथिको विद्युतीय कार्यवाही सन् २०१८ मा सुरु भएको हो। विभिन्न प्रकारका सबै आप्रवासी भिसाहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्नका लागि धेरै वर्ष लाग्छ। उक्त प्रक्रिया पूरा नभएसम्म केही आप्रवासी भिसावाहकहरूले अझै पनि अमेरिकाको प्रवेश विन्दुसम्म शिलबन्दी खाममा कागजातहरू हातैमा बोकेर जान आवश्यक पर्नेछ। यस्ता व्यक्तिहरूको भिसाको तल दायाँ कुनामा "IV DOCS in CCD" लेखिएको हुँदैन।
म मेरो पासवर्ड कसरी रिसेट गर्नु सक्छु ?
मैले के गर्नु पर्छ यदि मैले www.ustraveldocs.com मा मेरो प्रोफाइल दर्ता गरेपछि म अर्को देश उत्प्रेरित गरे र मेरो भिसा अझै लागू भएन, वा म अर्को देशमा नयाँ भिसा आवेदन पेश गर्न चाहन्छु भने मेरो अघिल्लो आवेदन ?
प्र.1 म मेरो पासवर्ड कसरी रिसेट गर्नु सक्छु ?
क्लिक गर्नुहोस् भूल तपाईंको पासवर्ड ? लिंक यो वेब पेज को तल ।प्रयोगकर्ता नाम क्षेत्रमा आफ्नो इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र पेस गर्नुहोस् । तपाईं आफ्नो भिसा आवेदन थाल्दा प्रयोग इमेल ठेगाना तपाईँले टाइप गर्ने इमेल ठेगाना मेल हुनुपर्छ। नयाँ पासवर्ड आफ्नो इमेल ठेगाना मा पठाइने छ।
नोट: नयाँ पासवर्ड आफ्नो इमेल ठेगाना noreply@ustraveldocs.com बाट पठाइने छ। केही इमेल आवेदन नियम जो फिल्टर एक स्प्याम वा जंक मेल फोल्डरमा अज्ञात प्रेषकहरूलाई छ। तपाईं आफ्नो इमेल सूचना प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कृपया आफ्नो जंक र स्पैम इमेल फोल्डरहरूमा सन्देश खोज्नुहोस।
प्र.2 मैले के गर्नु पर्छ यदि मैले www.ustraveldocs.com मा मेरो प्रोफाइल दर्ता गरेपछि म अर्को देश उत्प्रेरित गरे र मेरो भिसा अझै लागू भएन, वा म अर्को देशमा नयाँ भिसा आवेदन पेश गर्न चाहन्छु भने मेरो अघिल्लो आवेदन ?
यदि यो CGI द्वारा सेवा प्रदान गरिएको छ भने तपाई ले अर्को प्रोफाइल सिर्जना गर्न आवश्यक छैन। तपाईं बस यो वेबसाइट मा हाम्रो संपर्क खण्ड मा सम्पर्क गर्नु र आफ्नो पासपोर्ट नम्बर, UID वा इमेल ठेगाना हामीलाई प्राप्त गराउनु र हामी तपाई को प्रोफाइल लाई पुन: नयाँ बनाउछै जहाँ तपाईं आफ्नो अमेरिकी भिषा लागि लागू गर्ने योजना नयाँ देश संग आफ्नो प्रोफाइल अद्यावधिक गर्न सक्नु हुन्छ।
तपाईं CGI द्वारा कवर देशमा लागू गर्दै हुनुहुन्छ भने छैन , तपाईँलाई एउटा नयाँ प्रोफाइल सिर्जना गर्न आमन्त्रित गरिनेछ। एक रिमाइन्डर रूपमा, एक देशमा भुक्तानी MRV शुल्क रसिद अन्य देश गैर-हस्तांतरणीय छैन।